Indawo ephakathi nendawo enetimu yolwandle i-w/pool - I-Airbnb
Indawo ephakathi nendawo enetimu yolwandle i-w/pool
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Troy
Leli fulethi legaraji elisanda kuguqulwa linomuzwa okhanyayo nonomoya onetimu yolwandle ephumuzayo ebonisa ukuthula nokuzola. Kuyisisekelo esiphelele sokuvakasha kwakho e-Tulsa. Izindawo zokudlela ezisedolobheni, isifunda sobuciko kanye nezikhungo zemicimbi ziyimizuzu eyi-10 nje yokuhamba nge-Uber. Ungaphuthelwa ukukhangwa kuka-2019 #1 esizweni - Indawo Yokuhlangana.
Uzoba nendawo ekhethelwe yokupaka emgwaqweni, indawo yokungena yangasese efulethini elinebhavu eligcwele elineshawa enkulu eyengeziwe, ikhishi kanye ne-dinette, indawo yokuhlala eneziko ne-TV, kanye nombhede wendlovukazi othokomele. Kunekhabethe lokugcina izinto zakho kanye nokufinyelela elondolo uma licelelwe izivakashi ezihlala iviki noma ngaphezulu. I-Sofa iyi-futon futhi inikeza indawo yokulala eyengeziwe yaleso sivakashi sezikhathi ezithile. Iphuli kanye nevulandi kwabelwana ngazo nomndeni wami futhi kuvulwa Ngasekupheleni kuka-Ephreli kuze kube Ekuqaleni kukaSepthemba.
4.91 · 194 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-194
Indawo Yokuhlangana kanye nazo zonke izindawo ezikhangayo zedolobha laseTulsa iwuhambo lwe-Uber oluyimizuzu eyi-10. Umzila 66 ukude nje.
Sihlala esizeni endlini enkulu futhi ngokuvamile sifinyeleleka ngendlela ongathanda sibe ngayo. Uma ufuna ukuqhubeka ngasese, lokho kulungile. Uma udinga usizo noma amathiphu ngendawo yangakini, mina nomkami singakukhomba indlela efanele.